IFTIINKACUSUB.COM: Af-Somaliga cusub ,Wuu Farmajaysan-yahay macnaheedu ma waxa ay isu badashay waa uu Jibaysan yahay ?
Af-Somaliga cusub ,Wuu Farmajaysan-yahay macnaheedu ma waxa ay isu badashay waa uu Jibaysan yahay ?
Tan iyo maalintii la doortay Madaxwaynaha Somaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dad badan oo isaga tageersani waxa ay u muuqdeen, in ay yihiin kuwo jibada iyo xamasada ay uqabaan Madaxwaynaha aan cidna ka qarsan.
Hadaba iyada oo sidaasi ah , ayaa afkeena Somaliga waxaa kusoo biiray ayaamahan danbe ,in kalmada ama Magaca Farmaajo loo macnaystay iyada oo lagu kaftamaayo jibbo ama xamaasad,taasi oo iyada lafteedu ah mid ka turjumaysa kaftanka iyo xifaal-tanka dhexyaala dadka Somalida.
Maaha in aan uga jeedo in aan ku niyad jabinaayo dadka Madaxwaynahaasi jecel ama dageerada wayn u haya ,balse waxa ay iila muuqatay in ay tahay kalmad iyo odhaah ayaamahan dhalinyarada aad u dhex qaaday taasi oo aan aniga laftaydu is idhi malaha waa ay ku haboon tahay in aan kaftan yar ka idhaahdo.
Farmaajo maha macnaheedu xamaasad iyo jibbo ,balse waa madaxwaynaha Somaliya ee wakhtigan magaciisa ama naanaystiisa,waxaadse moodaa in magacan Farmaajo uu ayamahii inasoo dhaafay iyo hadaba uu qofkasta oo Somaliya soo hadal qaaday.
Kalmadan ah qofkaasi waa uu Farmajaysan yahay,waxa ay soo baxday xiligii uu doorashada ku guulaystay Madaxwayne Farmaajo,taasi oo qofkasta oo madaxwaynaha tageersan lagu odhan jiray waa uu Farmajaysan yahay.
Hadase kalmadii waxa aad moodaa in baraha warbaahinta iyo goobaha ay dadku isugu yimadaan ay isu badashay macne ka gadisan midii hore ee loo yaqaanay ,tasoo hada loo badalay hebel waa uu jibaysan yahay ama waa uu xamasadaysan yahay.
Inta badan dunida oo dhan ayaa ay ka dhacdaa in kalmad iyo hadal qof yidhi si kale ay dadku u turjumtaan,balse waa hadii kalmadaasi ay tahay mid si wayn suuqa u xushay ama ay dadku aad u hadal hayaan.
Waxa aan xasuustaa xiliyada qaar in riwaayadahii laga dhigi jiray magalada Hargaysa qaar ka mida suuqyada magalada lagu kaftami jiray sida riwayadii la magac-baxday Bidaari sibiq ayay kugu gashaa oo dadka Bidaarta leh lagula kaftami jiray.
Hadaba wakhtigan xaadirka ah ayaa waxa uu u muuqdaa in magaca Farmaajo ay dadwaynahu u isticmaali doonaan Jibbo,hadii adiga oo meel iska jooga lagugu yidhaahdo waa aad Farmajaysan yahay ,taas macanaheedu maaha in looga jeedo in lagu leeyahay madaxwaynaha ayaad jeceshahay ,balse ku darso in lagu leeyahay waa aad Jibaysan tahay ama waa aad xamasadaysan tahay .